Caafimaadka Archives - Soomaal Media Group
Soomaaliya iyo Cuba oo ka shaqeynaya soo celinta dhakhaatiirta la afduubay
in : Caafimaadka, Wararkii ugu dambeeyey
Nairobi (SMG) – Wasiirka arrimaha dibedda Kuba (Cuba) Bruno Rodriguez ayaa uga mahadceliyey Isniinta dhiggiisa Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto dammaanad-qaadka soo celinta labo dhakhtar oo u dhashay Cuba kuwaas sanad kahor laga soo afduubtey dalka Kenya. Wasiirka arrimaha dibedda ee Cuba ayaa ku soo hadal qaaday bartiisa Twitter-ka, isagoo qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Soomaaliya, …
Madaxwayne Trump ‘weli kama bixin kaynta karantiilka’
Washington (SMG) – Dhakhtarka Madaxweyne Donald Trump ayaa warbixin caafimaad oo uu soo saaray ku sheegay in kooxda caafimaadka ee daweyneysa madaxweynaha ay yihiin kuwa qaba “si taxaddar leh, rajo wanaagsan,” laakiin sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweynuhu “uusan wali ka bixin kaynta Karantiilka.” Qiimayntii ugu dambaysay waxay ka timid habeenkii Sabtida Taliyaha Ciidanka Badda Dr. Sean Conley. Wuxuu soo …
Trump iyo xaaskiisa oo laga helay feyriska COVID-19
Washington (SMG) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwada koowaad Melania Trump ayaa laga helay cudurka loo yaqaan ‘coronavirus. Trump ayaa ku dhawaaqay subaxnimadii hore ee jimcaha ee maanta. Waa mid ka mid ah halistii ugu weyneed oo soo food saarta madaxweyne Mareykan ah oo xaafiiska fadhiya tobanaan sano. Cudurkaan ayaa Mareykanka ku dilay in 200,000 oo Mareykan ah. Trump …
Cajiib: Wadnaheeda ayey dhabarka ku sidataa
London (Soomaal Media Group) – Salwa Xuseen waa gabadh aan WADNE LAHAYN waxayna ku wadataa boorsada ay xambaarsan tahay wadne gacan ku samays ah ( Artificial Heart). Xaaladaas oo kale dadka kusugan adduunka aad ayay u tiro yar yihiin. Waxay ku nooshahay dalka Ingiriiska. Culayska boorsada iyo mishiinka wadnaha ah ee kujira waa 6.8 Kg kaasoo ka kooban 2 battery …
Faahfaahin ku saabsan kufsi ka dhacay Garoowe
Garowe (Soomaal Media Group) – Wararka ka imaanaya Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland ayaa sheegay in gabar dhimirka ka xanuunsan oo 16 jir ah kufsi wadareed loogu geystey magaalada Garowe, sida ay sheegtay hooyada dhashay oo saxaafadda la hadashay maanta. Gabadha oo ay qoyskeeda weysanayeen saacaddo ayaa waxaa kufsi iyo jirdil u geystay labo nin oo la sheegay inay …
WHO oo sheegtay in la musuqay lacag loogu tagalay dagaalka COVID-19
New York (Soomaaliya Media Group) – Wadamada Kenya, Zimbabwe, Uganda, Somalia iyo Nigeria ayaa safka hore kaga jira lunsashada lacagaha loogu talagalay la dagaalanka Covid-19 ee caalamku ugu deeqay sida lagu sheegay warbixin ka soo baxay hay’adda WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegay in falalkaan musuqmaasuqa ah ay ku dhigmaan sida …
Dad badan ayaa la dhigay goobaha caafimaadka Magaaladda Oslo. Maxaa dhacay?
Norway (Soomaal Media Group) – Dhibaato dhulka hoostiisa ka dhacday, caasimadda Oslo ee Norwey ayaa gaartey meel khatar ah subaxnimadii Axadda ka dib markii dad badan oo xafladaynayay ay muujiyeen astaamaha sunta kaarboon moono-oksaydh, sida ay sheegayaan Booliska. Ilaa 25 qof ayaa loola cararay Cusbitaalka, iyadoo shan ka mid ah la sheegay inay halis yihiin sida lagu daabacay jariidada Dailyposten. …
Dhibaato ka taagan dadaalada looga hortagayo Fayriska Covid-19 gudaha Soomaaliya.
Muqdisho (Soomaal Media Group) – Caqabadaha ku xeeran COVID-19 ayaa ka joojineysa Soomaalida in ay raadsadaan daryeel caafimaad Soomaaliya iyo Somaliland si loo joojiyo faafitaanka fayraska, oo ay ku jiraan raad iyo raad raac. Xarumaha caafimaadka oo ay taageerayaan xubna ka tirsan hay’adda samafalka CARE International ee Soomaaliya / Somaliland, tirada dadka doonaya la-tashiga cudurrada la is-qaadsiiyo ayaa hoos u …
Dib-u-furista Iskuullada ma ahan mid sare u qaadeysa walaaca Feriska COVID-19
Dib-u-furista iskuuladda wadamada Yurub ayaan la fileynin inay kiciso xiisad weyn oo ku saabsan kiisaska cudurka coronavirus, Wakiilka Caafimaadka EU-da Stella Kyriakides ayaa wareysi sabtidii sidaasi ku sheegtay. “Daraasadaha lagu sameeyay dhowr waddan oo EU ah waxay muujiyeen in isu gudbinta ilmo-ilaa-cunug iskuulada ay aad u yar tahay isla markaana dib-u-furista iskuulada aysan la xiriirin koror weyn oo ah infekshannada,” …